Zimbabweans scramble for South African visas – Nehanda Radio
On Dec 28, 2010 136
Johannesburg — Illegal Zimbabweans living in South Africa have four days left to register for legal documents, the home affairs department said on Monday.
“The final bells for the registration of illegal Zimbabweans living in South Africa are tolling with only four days left before the deadline of 31 December 2010 as set out by Cabinet,” Home Affairs Minister Nkosazana Dlamini-Zuma said in a statement.
“Accordingly, and even at this late hour, we take this opportunity to make the final appeal to those who have not applied for their regularisation or those with fraudulently acquired South African documents to apply or submit such documents now and not wait for the deadline.”
May 30, 2019 26,964
Dec 18, 2017 13,326
Stop infighting, Jacob Zuma tells party
Dec 16, 2017 14,542
Dlamini Zuma wins #ANCKZNPGC nomination as battle for…
Dec 5, 2017 12,307
“The government is aware of the challenges faced by the Zimbabwean authorities in issuing valid travel documents to those seeking to apply for their regularisation in South Africa.
“In this context, the South African government will accept receipts issued by the Zimbabwean authorities as proof of their applications for such travel documents. SAPA
Mkuseli ApleniNkosazana Dlamini ZumaZimbabwean special dispensation
Cyril RamaphosaDavid Mabuza
African National CongressCyril Ramaphosa
#ANCKZNPGCNkosazana Dlamini Zuma
Dlamini Zuma wins #ANCKZNPGC nomination as battle for ANC’s top job heats up
Jacob ZumaJauques Pauw
Zuma’s alleged plot to squash R63 million tax bill
Aug 21, 2019 35,968
Aug 21, 2019 45,327